Fifaninanana Bilaogy Latina-Amerikana Voalohany · Global Voices teny Malagasy
Fifaninanana Bilaogy Latina-Amerikana Voalohany
Voadika ny 16 Janoary 2018 4:33 GMT
Mikarakara fifaninanana bilaogy “Loka Atina Bilaogy”(ES) ny Atina Chile(ES), hetsika ara-tsosialy mampiroborobo ny fibilaogina ao Shily. Afaka mandray anjara ny tsirairay, ary tsy maintsy amin'ny teny Espaniôla ny lahatsoratra. Ireto avy ny sokajy amin'izany: Politika, Siansa sy Teknolojia, Famoronana, Asa fanaovan-gazety, Zavakanto sy Kolontsaina, Bilaogy manokana na an'ny vondrona ary ireo mahazo fanamarihana manokana. Manana fahafahana hifidy ireo bilaogy mifaninana mandritra ny dimy volanany bilaogera. Ankehitriny, manana mpifaninana 10 amin'ny atsasa-dalana ny sokajy tsirairay. Hisafidy izay tsara indrindra amin'ireo lisitra ireo ny mpitsara.
Bilaogera fanta-daza ireo mpitsara. Avy ao Meksika, Eduardo Arcos (ES), avy ao Orogoay Walter Kobylanski (ES), avy ao Arzantina Mariano Amartino (ES), avy any Espaina Ignacio Escolar (ES) ary avy any Shily Fernando Flores (ES) sy Leo Prieto (ES).
Nilaza i “Periodismo Global”, bilaogera tafiditra atsasa-dalana ao amin'ny sokajy asa fanaovan-gazety fa “nanome fahafaham-po ho ahy ny voafidy ho tafiditra atsasa-dalana tamin'ity fifaninanana ity, ny voalohany tao Latinamerica, izay nahitana bilaogy maherin'ny 1200 nandray anjara.”
Momba ity fifaninanana ity, nanoratra i “Casto y Gay” (ES) hoe “nahatonga ahy hieritreritra ny fetran'ny fepetra ity fifaninanana ity, izay voafetra amin'ny sokajy momba ny zavatry ny tena manokana, politika, na zavakanto sy kolontsaina, …ny bilaoginao.” Nanakiana momba ireo bilaogy tafiditra atsasa-dalana ihany koa ny mpanoratra.
“Mangas Verdes” nanoratra hoe “Namoaka ireo bilaogy tafiditra atsasa-dalana amin'ny Loka Bilaogy Atina izy ireo, ny zavatra tsara indrindra dia misy ireo bilaogy tsy fantatro.”
Hanapa-kevitra ny vokatra farany amin'ny 30 aprily ny mpitsara.